Ac milan oo xiiseyneyso weraryahanka Lazio Immobile.
Home Suuqa kala iibsiga Ac milan oo xiiseyneyso weraryahanka Lazio Immobile.
Kooxda reer talyaani ee AC Milan ayaa doonaysa inay la soo saxiixato weeraryahanka Lazio Ciro Immobile xagaaga, sida laga soo xigtay Fichajes.
Milan ayaa la soo saxiixatay Mario Mandzukic heshiis waqti gaaban ah bishii Janaayo laakiin waxa ay u muuqan kartaa inay sii xoojineyso xulashooyinkooda weerarka ee Immobile, kaasoo ku guuleystay xilli ciyaareedkii hore European Golden Shoe.
Immobile, oo 31 jir ah, ayaa dhaliyay 19 gool 27 kulan oo uu saftay ilaa haatan xilli ciyaareedkan.
Previous articleManchester United iyo Manchester City oo u dagaallamaya Dayar ka tirsan Kooxda Toronto
Next articleLautaro Martinez oo ka sheekeeyey Sidii uu ugu dhawaaday ku biirista barcelona